Humni Bilxiginnaa qabeenya ummataa ibiddaan gube – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHumni Bilxiginnaa qabeenya ummataa ibiddaan gube
Humni Bilxiginnaa qabeenya qonnaan bultoota Aanaa Bosot ibiddaan gube.
Qe”n ibiddaan gubate kun aanaa Bosat keessatti akn argamu qe’ee warra Jaal Gammadaa Bosee fi maatii isaa ti.
Humni Bilxiginnaa galgala gaafa 14/04/2021 galgala ibiddaan barbadeessan.
Qabeenyi gubate kunis kan Jaal Gaammadaa Bosee, kan abbaa isaa, Ob Bosee Dhugoo, obbolaa isaa, Kabbadaa Bosee, fi Gadaa Bosee ta’uun beekameera.
Humni Bilxiginnaan kanaan duras Oromiyaa kibbaa, godina Booranaa, godina Gujuu, Oromiyaa lixaa, godna Wallaggaa lixaa fi Oromiyaa giddugalaa, Shaggar lixaa fi Shagar Kaabaa keessatti bifuma walfakkaatuun qabeenya ummataa ibiddaan gubaa turuun kan yaadatamuu dha.
Doorsisi meeshaa waraanaanii fi humni ittisaa gaaffii ummataa ukkaamsee hambisuu hin dandahu
Doorsisi meeshaa waraanaanii fi humni ittisaa gaaffii ummataa ukkaamsee hambisuu hin dandahu. [SQ-Waxabajji 8/2021] Yeroo…
Waaqayyo inni Oromoo Uume Gootota Oromoo Cinaa goree Gumaa Uummata Oromoo Waaqa baasuu dha. Kana waan ta’eef Uummatni Oromoo Uumama isaa irraa kaasee Jedhaniif Waaqa jedha utuu hin taane Uummata Uumama isaa irraa kaasee Waaqa ofrratti beekee Waaqefataa turee fi Waaqaefataa jiruu dha waan ta’eef Waaqni isaa akka isa cinaa dhaabbatee humnaa fi gargaaraa isaaf akka ta’u kadhachaa fi galateefachaa jireenya Waaqayyo keenneef akka inni itti hin jiraanne warra gochaa turanii fi gochaa jiran akkasuma biyya Waaqayyo irratti isa Uume irratti Sababa tokko malee warra itti duulee jireenya isaa warra balleesuuf itti duule kana ofirraa itisuu fi of jiraachsuuf wal cinaa hiriiree tokkummaa dhaan falmmii Bilisummaa isaa fi Walabummaa Biyya isaa finiinsuun dirqama Uummata Oromoo jedhamu Biyya Oromiyaa jedhamtu irratti jiraachisuu dhaa ta’a!
Waaqayyo waan hojjetus waan hojjeeteefis Waaqa beekuu dha. Karaa Waaqayyo hojjetu Namni beekuu hin danda’u erguma inni hojjeetee darbeeti booda kan namni argee dinqii Waaqayyo hojjete jedhee irratti dubbachuu danda’u.
Kanaaf kan fakkeenyaa ta’u Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo isa ta’e ABO irra Bara 1992 irra kaasee waan mudataa ture fi ololli irratti oofamaa ture kan yaadatamuu dha.
Hata’u malee Garuu akka Diinni hawwee fi fedhe sanatti Galani kan Waaqayyooti ABO fi WBOn hin dhumnes hin dhabamnnes. Yeroo Diinotni yeroo arganne jedhanii ABO bakkaa fi biyya dhabsiifna jedhan sanatti ykn ABO biyya itti Irkatan dhabsiifna yeroo jedhan sanatti Waaqayyo akkuma Yoonaas nama jedhamu Garaa Qurxumii keessatti Guyyaa fi Halkan Sadii Garaa Quxumii keessatti tiksee baase sana ABOn akka hin dhumnee fi akka hin dhabamne godhee jira Waaqayyo. Dinqii hojjeteen Isaayaasii fi Mallasii warra Dammaa fi Damma waliitti ta’ee ture Ibddaaf Gaaza walitti isaan godhee Jaalala Isaayaas ABOf ykn Uummata Oromoof qabaatee utuu hin taane dinqii Waaqayyo hojjeteen ABOn Biyya Eriteraa Isaayaas Bulchu keessa 27f tiksee tursee jiraachisee akka inni Kaayyoo dhugaa qabatee socho’aa turee fi socho’aa jiru sadarkaa amma Uummata isaa wajjiin irratti argamu irraan ga’ee jira. Dinqii itti aanus hin hojjeta Waaqayyo Uummata haqaa fi mirga dhabeef falmatu yoom iyyuu gargaaruu irraa hin dhaabbatu Waaqayyo akkasuma warra dinqii inni hojjetu dhugaa isaaf ba’u nu taassisa karaa hundumaa haqa keenyaa fi biyya keenyaaf tokkummaa dhaan haa falmannu!!! Bilisummaan Uummata Oromoof! Walabummaan Biyya Oromo Oromiyaaf! Galatnii fi Ulfinni Waaqa isa Oromoo Uumee Diina isaa ifatuuf ta’a.